कोरोना भाइरस र यसको प्रभाव
2021-06-18 08-06 | Hamro Biratnagar
७७ सालको सुरुवातमा नै कोभिडले विश्व आक्रान्त थियो । त्यसमा नेपाल अछुतो रहने त कुरै भएन । कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालले ७६ सालको चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै लकडाउन गरेको थियो । पटकपटक गरी चार महिनासम्म लकडाउन भयो ।
अन्य देशमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसंँगै गएको साउन ६ गतेदेखि एक सय २० दिन लामो लकडाउन भने अन्त्य भयो । लकडाउन हटेपछि बजार पसल खुले । ढिलो गरी भए पनि शैक्षिक संस्था खुले । सबै क्षेत्रमा चहलपहल बढ्यो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणदर घट्दै पनि गयो ।
तर, भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल फेरि एक वर्ष अगाडिकै अवस्थामा फर्किएको छ । कोरोनाको जोखिम फेरि बढेको छ । लकडाउनको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै फेरि दोस्रो लहरको डर बढेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिए पछि नेपालमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । विद्यालय बन्द गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द छन् । सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस ( कोभिड १९ ) को दोस्रो भेरिएन्टको भाइरसले संसारलाई नै त्रसित बनाएको छ । कोरोना भाईरसको रोकथाम गर्न विभिन्न देशहरु यसको प्रयासमा लागिरहेका छन् । वर्तमान समयमा कोरोनाको प्रकोपबाट त्रसित नभएको सायद कुनै क्षेत्र छैन होला ।
यसको प्रकोप नेपालमा पनि उच्च छ । कोरोना भाईरसबाट विश्व नै आतंकित भइरहेको बेला नेपालमा पनि कोभिड १९ का संक्रमित बिरामीको अनुपात हिजोको तुलनामा आज बढ्दो छ । यससँगै नेपाल सरकारले कोरोना भाईरसको सम्भावित रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सामाजिक पृथ्वीकरणले गर्दा मानिसहरुको समूहमा भेला हुने प्रचलन निषेधित गरिएको छ ।
कसैले पनि नसोच्नु की निषेधाज्ञाको अर्थ सरकारले मनोरञ्जनका लागि विदा दिएको हो । तर यो कफर््यू लगाएको पनि होइन । निषेधाज्ञाले दिन खोजेको सन्देश र यसको अर्थ कफर््यू भन्दा गम्भिर छ । यो आपतकालीन र संकटकालीन अवस्थामा नागरिक आफैँ पनि सचेत हुन अति आवश्यक छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य स’रक्षाको मापदण्ड पालना गनर्’पर्छ । जिषेधाज्ञाको आदेश प”र्णरुपमा पालना गनर्’पर्छ ।
कोरोना भाइरस र नेपाल
कोभिड १९ नामक कोरोना भाईरसको संक्रमण खासगरी चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको हो । चीनसँग सिमा जोडिएको र ऐतिहासिक रुपमा द्विपक्षिय सम्बन्ध गाँसिएको हुनाले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । सिमा जोडिएको हुनाले नेपाललाई समयमै सतर्कता अपनाउन भनिएको थियो । ककसले कति सतर्कता अपनाए त्यो आफ्नो ठाँउमा छ ।
कोरोना भाईरस भित्रिए कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारको समयमै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । विमानस्थल र नाकाको कडाईमा समयमै सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकै कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ ।
कोरोना भाईरसले हाम्रो समुदायका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
कोरोना भाईरसबाट हामी कोही संक्रमित भैहालेका त छैनौँ होला तर कोरोनाको भय र भ्रमले गर्दा हामी थलिइसकेका छांै । कोभिड १९ भन्दा पनि डरलाग्दो भाईरसका रुपमा खडा भएको छ हामीले समाजमा जन्माएको अनावश्यक भ्रम ।
जे होस, अहिलेको प्राथमिकता कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जोगिनु र जोगाउनु बाहेकको विकल्प हामीसँग छैन । यो जटिल परिस्थितिमा एकअर्काको साथको आभास गर्नुपर्छ । यो अन्य प्राकृतिक विपद्भन्दा पृथक छ । यसले विश्वलाई नै एकैसाथ ग्रसित बनाएको छ । हामी घरभित्र बसिदिँदा आफू सुरक्षित हुनुका साथै परिवार, समाज र मूलुकलाई बचाउन ठुलो सहयोग हुन्छ भने हामीले यति किन नगर्ने ?
अग्रपंतीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीहरु उच्च जोखिम मोलेर देश र जनताका निम्ति काम गरिरहेका छन् । उद्दार, राहत र सिमा, विमानस्थल, सडक, भिडभाड लगायतका क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले उच्च सतर्कता नअपनाउने हो भने, स्वास्थ्यकर्मीले सेवामा खटिएको बेला उचित सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्ने र पत्रकारहरुले रिपोर्टिङका क्रममा सुरक्षित नहुने हो भने कोरोनाले निम्त्याउने संकट अझ भयबाहक हुन्छ । ड्युटिमा खटिँदा सुरक्षित भई आवश्यक मास्क, पञ्जा, पोशाक, सेनिटाइजर लगायतका सामाग्री तत्काल उनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
हाम्रा देशका व्यापारीहरुलाई देशमा संकट देखा पर्दा ठुलै चाडपर्व आए झँै हुन्छ । कयौं संकटका समयमा पनि चेत्न नसकेका व्यापारीहरु अहिले विश्व नै त्रसित भई रहेको अवस्थामा कालोबजारी सुरु गर्न थालिसकेका छन् । व्यापारीहरुले मानवता भन्ने चिज नै पर सारिसकेका छन् ।
व्यापारीहरुले कसलाई कतिबेला के आपत पर्छ भनेर मौका पर्खिरहेका छन् । सर्वसाधरणले आफ्नो चुल्हो बाल्न नसकेको अवस्थामा बिहान बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भैरहँदा सामानको भाऊ आकाशिन थालेको छ ।
अन्य संकटको समयमा जस्तो आफूसँग भएको सामान लुकाएर अभाव खडा गर्न व्यापारीहरु पल्किसकेका छन् । व्यापारीहरु सामान लुकाउने अनि महँगोमा बिक्री गरेर नाफा कमाउने दाउमा यतिबेला कोरोना भाईरसलाई पनि बनाईरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसले नेपालको आर्थिक अवस्था संकटमा परेको छ । आयस्रोत न्युन छ । कोभिडले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
कोरोनाबाट बच्न यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ :
सबै सार्वजनिक स्थल तथा कार्यालयहरुमा तथा सबै किसिमका जमघट र भेलाहरुमा कम्तिमा २ मिटरको दूरी अनिवार्य कायम राख्ने,
घर बाहिर निस्किँदा सर्जिकल वा तीन तहले बनेको कपडाको मास्क प्रयोग गर्ने,
सबै सार्वजनिक स्थल तथा कार्यलयहरुले आफ्नो परिसरमा हात धुने साबुन पानी वा स्यानिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्ने,
कार्यालय प्रवेश गर्दा अनिवार्यरुपमा साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्ने,
प्रत्येक दिन कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा थर्मोमिटरबाट ज्वरो परीक्षण गर्ने,
१००.४ डिग्री भन्दा बढी ज्वरो भएमा काममा नलगाउने,
दैनिक हाजिरी लगाउने कार्यालयहरुले फेस रिडिङबाट हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने वा सुपरिवेक्षकले अभिलेख राख्ने,
खोकी तथा श्वासप्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई काममा नलगाउने,
आवश्यक निदान, उपचारको व्यवस्था मिलाउने,
खानपानको व्यवस्थापन राम्रोसँग मिलाउने,
प्रयोग गरिएका सामाग्री तथा भाडाहरु राम्रोसँग सफा गरेर सुकेपछि मात्र प्रयोग गर्ने,
स्नानघर तथा शौचालयहरुलाई दैनिक २ पटक नियमित रुपमा सफा गर्ने,
हात धुने बेसिनहरुबाट संक्रमण सर्ने जोखिम हुनेहुँदा दात माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरु बेसिनमा नराख्ने,
धेरै प्रयोग हुने ढोका, टेवल तथा अन्य सामाग्रीहरु दैनिक डिसइन्फेक्टेड गर्ने,
कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा चिकित्सकको परामर्शमा उपचार गराउने
घातक चिनियाँ ओबिओआर : ३० वर्षसम्म चिनियाँले सञ्चालन गरेपछि पार्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने
चिनियाँ खोपको वास्तविकता के हो ?
देशव्यापी खुला कविता प्रतियोगितामा प्रथम बनिन् दमककी सेलिया, रतुवामाइकी शर्मिला तृतीय
आजबाट क्लब हाउस एपमार्फत लाइभ टक शो सञ्चालनमा ल्याउँदै हाम्रो विराटगर
यस्तो थियो विवेकशीलका संस्थापक नेता उज्वल थापाको राजनीतिक यात्रा
कमरेड प्रचण्ड अस्ताउँदो सूर्यजस्तै अन्धकारमा विलीन भइरहनुभएको छ स: बादल